UNGAYENZI Kanjani Izinqumo Zonyaka Omusha Zisebenze | Martech Zone
Lwesibili, Disemba 29, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 URobby Slaughter
Unyaka omusha usalelwe yizinsuku ezimbili. Njalo ngonyaka, cishe isigamu sabo bonke abantu baseMelika benza Izinqumo Zonyaka Omusha, kodwa iningi alizigcini. Sisebenzisa ukuqala kwekhalenda elisha ukuzama ukukhuthaza ushintsho olukhulu, kepha akusebenzi ngaso sonke isikhathi. Yingakho ukukhuluma ngakho UNGAZENZI KANJANI Izinqumo Zonyaka Omusha kungumcimbi wokuqala wonyaka omude we-2010 Productivity Series obusingethwe yi-Slaughter Development. (Qhubeka ufundele isephulelo esikhethekile!) Kukhona indlela engcono yokuzibekela nokuhlangabezana nezinhloso, ikakhulukazi maqondana nokuthi ubusebenzisa kanjani ubuchwepheshe bokumaketha ukukhuthaza ibhizinisi lakho nomkhiqizo wakho.
Izinhlobo ezintathu zezinhloso
Isizathu esiyinhloko sokuthi kungani sehluleka ukugcina izinqumo zethu zonyaka omusha kungenxa yokuthi zakhiwa uhlobo olungelona lwenhloso. Cabanga ngezigaba ezinkulu zezinhloso:
Imigomo Engacacile - Uma isinqumo sonyaka wakho omusha sithi “Yiba sesimweni” noma “Khulisa ibhizinisi lakho”, cishe ngeke uphumelele. Lokho kungazwakala kukuhle ephepheni kepha uzokwazi kanjani uma uthuthuka? Uzokwazi kanjani uma usufinyelele leyo nhloso?
Imiphumela Yezinjongo - Imvamisa izinqumo zethu zonyaka omusha zisekelwe imiphumela. Isibonelo, ungahle unqume ukuthi "ulahlekelwe amakhilogremu angamashumi amabili" noma "wandise ukuthengisa ngo-25%." Lezi zingcono kunezinjongo ezingacacile ngoba zingalinganiswa, kepha kaningi zithonywa izimo ezingaphandle kwamandla ethu. Ukuhlelwa kwemigomo kufanele kube ngaphezulu ngomsebenzi kunemiphumela.
Izinqubo Zokucubungula - Lezi yizinhlobo ezinhle kakhulu zezinhloso ngoba ziveza lokho wena ngifuna ukwenza. Bancike kakhulu emzamweni kunangethuba elingahleliwe. Cabanga ngesinqumo esithi "ukuzivocavoca amahlandla amane ngesonto" noma "ukufinyelela kumathemba amathathu amasha usuku ngalunye." La maphupho angenziwa ngokoqobo ngokuzikhandla. Awudingi imetabolism yakho noma imakethe ukuze ubambisane.
Ukuzibekela imigomo ngokukhangisa nobuchwepheshe
Nazi ezinye izindlela ezesabekayo zokusetha izinhloso zokumaketha kwakho nobuchwepheshe bakho ngonyaka ozayo Musa yenza lezi izinqumo zakho:
Khulisa isilinganiso sezindaba ezivuliwe ngo-10%
Phinda kabili abalandeli bami be-RSS
Thuthukisa umkhankaso wokukhangisa onamandla kakhulu wemikhiqizo ephambili
Lungiselela ukusetshenziswa kwami ​​kwama-plugins we-WordPress
Lezi zinhloso nazo akucacile noma futhi okuqondiswe emiphumeleni. Esikhundleni salokho, zama ukuziguqula zibe kulezi zinguqulo, ezigxila kunqubo ozoyisebenzisa ngokuzayo:
Yenza ukuhlolwa kwe-A / B ukuzama ukwakheka kwencwajana entsha
Thuthukisa amamethrikhi ekuhlaziyeni abafundi be-RSS
Zama izixuku isikhangiso esisha
Isikhathi sokubekisa ukubuyekeza ngobuhlakani ama-plugins wami we-WordPress wamanje
Unentshisekelo yokufunda kabanzi ngezinqumo kanye nobuchwepheshe bonyaka omusha? Bhalisela i- “HHAYI UKUZE UZENZE Izinqumo Zonyaka Omusha Zisebenze” ngoLwesithathu, Januwari 6 @ 2:00 PM lapha e-Indianapolis. Abantu abane bokuqala ukubhalisa online ngekhodi yesaphulelo I-MKTGTECH uzothola isaphulelo esimangazayo! Bhalisa namuhla!
Ingabe iCopernicus noma i-Aristotle iqhuba ibhizinisi lakho?